आगामी साताको मौसम : अधिकांश भूभागमा अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम घट्ने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
आगामी साताको मौसम : अधिकांश भूभागमा अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम घट्ने
पुस १०, २०७८ रासस
काठमाडौँ — यो साता देशको अधिकांश भू-भागमा अधिकतम तथा न्यूनतम तापक्रम घट्ने भएको छ । पश्चिमी वायुको प्रभावले देशका धेरै स्थानमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अधिकांश भू-भागमा अधिकतम तथा न्यूनतम तापक्रममा गिरावट आउने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।
साताको सुरुमा देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
साताको मध्य तथा अन्त्यमा सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात र थोरै स्थानमा भारी हिमपातको समेत सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
देशको पहाडी भू-भागमा साताको सुरुमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश नं १ तथा वागमती प्रदेशको एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा र साताको मध्य तथा अन्त्यमा सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा, थोरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित वर्षा र एक/दुई स्थानमा असिनाको समेत सम्भावना छ ।
देशको तराईका भू-भागमा साताको मध्य तथा अन्त्यतिर सामान्यदेखि पूर्णातया बदली रही साताको मध्यमा थोरै स्थानमा हल्का वर्षा र साताको अन्त्यमा केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ ।
प्रकाशित : पुस १०, २०७८ २०:४०
पुस १०, २०७८ अर्जुन राजवंशी
बिर्तामोड — नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशमा एमाले बाहेक अरु कम्युनिस्ट पार्टी नै नभएको जिकिर गरेका छन् । उनले माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, बामदेव गौतम र झलनाथ खनालहरू वामपन्थी नभई 'हामपन्थी' भएको आरोप लगाए ।
शनिबार गृहजिल्ला झापाको बिर्तामोडमा एमाले जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको १० औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाई तथा सम्मान कार्यक्रममा ओलीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
यस क्रममा उनले मुलुकमा अहिले एमाले बाहेक वामपन्थी नै नभएको दाबी गरेका हुन् । ‘कम्युनिस्ट सरकार ढालेर । वामपन्थी सरकार ढालेर कांग्रेसको सरकार बनाइदिनेहरू वामपन्थी हुन् ? कांग्रेस वामपन्थी हो ? कांग्रेसको पछि लाग्ने वामपन्थी हुन्छन् भने माउ चाहिँ त खाँटी वामपन्थी हुन्छन् होला नि त ?’ कांग्रेसको पछि लाग्नेहरू वामपन्थी नभई हामपन्थी भएको उनको आरोप थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, बामदेव गौतम र झलनाथ खनाल एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्ने मुख्य आयोजक भएको पनि उनको आरोप थियो ।
पाँच दलीय गठबन्धन देशको अहिलेको मूल प्रतिक्रियावादी शक्ति भएको पनि ओलीको आरोप छ । र गठबन्धन देशका लागि हानिकारक रुपमा अघि बढेको पनि बताए ।
यस्तै फागुनमा गराउनुपर्ने स्थानीय चुनाव गठबन्धन सरकारले मंसिरमा पुर्‍याउने चलखेल गरिरहेको पनि उनले आरोप लगाए ।
‘यिनीहरू समयमा निर्वाचन गराउने नीतिमै छैनन् । यिनीहरूलाई लोकतन्त्रसँग कुनै मतलब छैन’ ओलीले भने,‘स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन कानुन बमोजिम भन्ने हो भने फागुनमा गर्नुपर्ने हो । तर, यिनीहरूले मंसिरमा पुर्‍याउने स्थिति छ ।’
ओलीले निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउनुपर्ने पटकपटक जानकारी गराउँदा समेत सरकार मुखमा भोटे ताल्चा लगाएर बसेको टिप्पणी गरे । ‘निर्वाचन आयोगले चुनाव गर्नुपर्छ भनिरहेको छ, सरकार चुप लागेर बसेको छ । मुखमा भोटे साँचो लाएर । कहिले गर्छ निर्वाचिन ?’ उनले सोधे । यस्तै उनले गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूलाई ‘पञ्चरंगी’ र ‘पश्चगामी तत्व'को संज्ञा दिए ।
प्रकाशित : पुस १०, २०७८ २०:२६